I-German Shepherd Wolf Mix Mix Breed Information, Izithombe Nentengo - Izinhlobo
Abaningi bakholelwa ukuthi izinja ziye zafuywa izimpisi eminyakeni engaphezu kwengu-15 000 edlule. Kepha kwenzekani lapho impisi engafundiswanga izalwa nenja?
I-German Shepherd Wolf Mix iyisibonelo esisodwa esihle.
Kwesinye isikhathi kwaziwa ngokuthi yiWolf Shepherd lolu hlobo olunamandla akuyona eyabaqalayo. Badinga ukuzivocavoca umzimba, ukuqeqeshwa kanye nokuzijabulisa.
Kulesi sihloko, sabelana ngakho konke odinga ukukwazi ngohlobo, umlando wabo, ubuntu babo, nobuntu babo, kanye nokuzivocavoca kwabo, ukuzijabulisa, kanye nezidingo zokuqeqeshwa ...
Uyini Umxube Wempisi Yomalusi WaseJalimane?
Kungani Sithanda Le Wolfdog
Umdlwane WamaJalimane Welusi Wenhlanganisela
Ukubukeka Kokuzala, Umbala, Nosayizi
Usayizi Wenhlanganisela Yomalusi WaseJalimane
I-German Shepherd Wolf Mix Temperament
Izinkinga Ezaziwayo Zempilo
Lolu hlobo yilokho igama labo elizwakala ngathi - uhhafu waseGerman Shepherd nengxenye eyi-Eurasiaan Wolf.
Ukuhlanganiswa kwe-German Shepherd Wolf kuhlanganisa izici ezinhle kakhulu zezimfanelo ze-German Shepherd and Wolf. Lokhu kuhlanganiswa kuthwala izici ezinamandla ezifana nezempisi futhi kuvame ukuthiwe yimpisi yasendle.
Ngo-1935, uLeendert Saarloos wazala uMalusi waseJalimane ngempisi yasendle yase-Eurasia.
U-Leendert uqambe igama lohlobo a USaarloos Wolfdog .
Ukhulise le mpisi ngenhloso yokugcina izici zemvelo nokubukeka kwempisi ngokufuywa kwenja. Wayephumelela ekuzaleni i-German Shepherd Wolf Mix yokuqala emhlabeni futhi wachaza inja ngokuthi: ukuvikela, ukuthembeka nokusebenza kanzima.
Kusukela ngohlelo lokuzalanisa lukaLeendert sekuxutshiwe ezinye izingxube zempisi ezinjengeCzechoslovakian Wolfdog, iTamaskan Dog neNorthern Inuit Wolf Dog.
Naphezu kokuthandwa kwabo, izinhlamvu zempisi zinjalo akukho emthethweni ezifundazweni eziningi . Futhi azaziwa njengezinja ezisemthethweni zeAmerican Kennel Club ngenxa yokungaqageli kwazo.
Ukuze uqhubeke uqonde ingxenye yale nja yasempisi yasendle kubalulekile ukuthi sibhekisise zombili izinhlobo zabazali.
Kunezinhlobo ezimbili eziyinhloko zempisi ezifuywa nenja yaseJalimane enguMalusi:
Impisi yeCarpathian - ikhuliswe neHusky ukunikeza i ICzechoslovakian Wolfdog .
Endle impisi isebenza kanzima ukuzingela ukudla kwayo ngakho-ke inamandla okusebenza nokusebenza okunamandla okuzingela.
Izimpisi ziyizilwane zasendle ezidla ezinye.
Akekho ophumelele ukufuya ngokuphelele impisi yasendle . Kuhlala kunezinga lokungaqageli kulezi zinhlobo futhi kunzima kakhulu ukuzihlanganisa nemvelo eyenziwe ngumuntu.
Ukubukeka okufana neWolf, uMalusi waseJalimane waqala ukukhuliswa ngo-1899 ngu-Max von Stephanitz .
ABelusi baseJalimane bayizinhlobo zezinja ezihlonishwayo ezaziwa ngemvelo yazo yokuzivikela nobuhlakani bazo.
Bayinja eqotho lokho kusebenza kanzima kakhulu. Ukusebenza kwabo ngokuqinile ngesinye sezizathu esenza bathandwe kakhulu ngamaphoyisa namasosha.
Kodwa-ke, umalusi waseJalimane akayona nje inhlobo esebenzayo. Ukukwazi kwabo ukuqeqeshwa kalula nokufuywa ekhaya kuholele ekwandeni okwedlula njengenja yomndeni.
Umxube we-German Shepherd Wolf uluhlobo oluhle oluhlanganyela izici eziningi ezifanayo zempisi.
Lolu hlobo luvikela kakhulu. Into eyodwa abelana ngayo bobabili uMalusi waseJalimane neWolf ubuntu babo obuqotho.
Amakhilogremu angama-50 kuye kwayi-120
Ngaphansi kwama-intshi angu-24
Iminyaka engu-9 kuya kwengu-13
Le njana ngokuvamile ibiza u- $ 800 kuye ku- $ 1,000.
Ngoba lolu hlobo alutholakali kakhulu, inani lazo lincike ngokuphelele kumfuyi hhayi ekufunweni komthengi, njengoba kunjalo ngezinhlobo eziningi zezinja.
Abafuyi abanolwazi abaye bazala izizukulwane eziningi zezinja zaseJalimane i-Shepherd Wolf Mix kungenzeka bakhokhise u- $ 1,000. Udoti ngamunye ngokuvamile unemidlwane eyisithupha. Lokhu kususelwa kusayizi kadoti ophakathi wempisi eba yimidlwane emine kuye kweyisithupha nemidlwane eyisishiyagalombili yaseGerman Shepherd.
Ngemuva kokuthola umdlwane wakho unamasonto ayisishiyagalombili ubudala, amasonto ayishumi alandelayo kakhulu iwindi elibalulekile lomphakathi .
Ukuba ngumxube ongalindelekile futhi oyingxenye yempisi, kufanele ulindele ukuchitha isikhathi esiningi sokuqeqesha nokuzijabulisa nomdlwane wakho.
Umfuyi omuhle uzoqinisekisa ukuthi uyakwazi ukunikeza ingane yakho uqeqesho olwanele nokuzijabulisa - ikakhulukazi kule ngxube.
Ngokungafani nezinja eziningi ezi-hybrid, ukukhomba ukuxubana kwe-German Shepherd Wolf kulula kakhulu.
Umalusi waseJalimane wabelana ngezici eziningi ezifanayo zempisi ngakho-ke lokhu kuhlangana nakho kuyenzeka.
Inja lena ifana nempisi kakhulu kunanoma iyiphi enye inja efuywayo .
Baningi izici ezifana nempisi . Yize benekhanda elincanyana kunempisi yasendle ngokuhlukile bayafana kakhulu ngamehlo nezindlebe ezimise okwensundu ne-alimondi ezihlala phezulu kwekhanda labo.
Iningi lezinja ezi-hybrid zivela zifane njengomunye wabazali bazo, noma kunjalo, zombili izinhlobo kuleli cala zibukeka zifana nempisi. Umdlwane wakho uqinisekisiwe ukuthi uzobonakala uqinile, wakhiwe kahle futhi unezemidlalo.
Le hybrid yempisi ihlukaniswa njengezinhlobo ezinkulu zezinja ezizosinda noma yikuphi phakathi kwamakhilogremu angama-50 kuye kwangama-120.
Ukwehluka kwabo kwesisindo esikhulu kungenxa yomehluko wosayizi kuzo zombili izinhlobo zabazali nobubanzi bokuphakama bomndeni wempisi.
Inja yakho ngeke ikhule ngaphezu kobude obungamasentimitha angama-24 ukusuka ekubuneni.
Njengezinhlobo eziningi, abesifazane bavame ukuba bancane ngosayizi nesisindo kunabesilisa.
Lokhu kuhlanganiswa kwempisi ngokuvamile kuzuza njengejazi labazali babo bempisi.
Imvamisa banebhantshi elifana nempisi elifana nensimbi elijiyile, futhi elincane.
Ngokomlando ijazi labo lisiza ukuwavikela ezimweni zezulu ezinzima futhi livikela isikhumba sabo kumfucumfucu. Izinja eziningi zinamajazi amabili njengoba kungukujwayela endle okusathwalwa izinhlobo eziningi ezifuywayo.
Umalusi waseJalimane angafika ngemibala eminingi ehlukene (isb. okuluhlaza okwesibhakabhaka futhi mnyama ). Kepha, ngokufana nokhokho babo beWolf, i-German Shepherd Wolf ixubeka kakhulu iza ngamathoni esable to white noma imbala emnyama - ngokufana nokhokho babo beWolf.
Zivame ukuchitha ama-shedders.
Imvamisa yabo yokuchitha izokwanda nganoma yiziphi izinguquko zonyaka. Isibonelo, zichitha kaningi entwasahlobo kunasebusika njengoba ziqala lungiselela isimo sezulu esishisayo .
Isimo somxube we-German Shepherd Wolf singachazwa kuphela njengokungaqondakali - lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi ezimweni ezisabisayo noma ezintsha.
Ngenxa yemvelo yabo yempisi bona kungaba nolaka futhi basabele ngokungalindelekile lapho bezizwa besongelwa.
Le mikhuba ingaguqulwa kancane ngokusebenzisa umphakathi wokuqala njengedlwane, kepha lokhu kuzoba nzima kubanikazi abasha.
Lolu uhlobo futhi oluvikela kakhulu ngakho-ke izingeniso ezifanele nabanye abantu nezilwane ezifuywayo ziyadingeka.
Umxube waseGerman Shepherd Wolf waziwa ngokuhewula.
Lokhu akumele kusimangaze ngenxa yemvelo yabo yezilwane eziqoqiwe abayizuze izimpisi. Ukuhewula kungenye yezindlela ezivame kakhulu ze- ukuxhumana kwempisi kuya kwempisi .
Ukuhewula okungadingekile futhi okunenkinga kungavela uma lolu hlobo lushiywa lodwa isikhathi eside. Lesi sici senza le nja ingathandeki kubantu abamatasa.
Le nja ibuye ibe nokushayela okuphakeme kakhulu. Ngakho-ke, asibancomi ukuthi bahlale emakhaya anezilwane ezincane njengamakati, onogwaja noma ama-hamsters. Bangazwana nezinye izinja, kepha kufanele babhekwe futhi baziswe kwezinye izinja besebancane.
Inja efuywayo ( njengoMalusi waseJalimane ) inobuntu obuhluke kakhulu kwimpisi yasendle. Ngakho-ke kuyinkohliso kakhulu ukubikezela ukuthi yiziphi izici zobuntu bakho i-hybrid yakho ezoba nazo.
Ukusondela kulolu hlobo kuthatha isikhathi esiningi nokubekezela .
Ukudlala kuyindlela enhle yokubopha umdlwane wakho, ukuqeda amandla abo nokunciphisa amazinga abo okucindezeleka.
Bayaziwa ukuthi banamahloni ekuqaleni.
Kodwa-ke, ekugcineni ubuntu bukaMalusi waseJalimane obufuyiwe buyothatha izintambo. I-German Shepherd Wolf Mix iyachuma njengomngane womndeni futhi imvamisa banothando olukhulu kumalungu omndeni wabo.
Into eyodwa abelana ngayo bobabili uMalusi waseJalimane neWolf ubuntu babo obuqotho.
Impisi yisilwane samaphakethe ngakho-ke akumangazi ukuthi le nhlanganisela ivikela umndeni wabo.
Cha. Ngeke sincome nokuthi kugcinwe ukuxubana kwe-German Shepherd Wolf ekhaya elinezingane ezincane. Abanaso isineke. Kufanele zibhekwe ngokucophelela futhi zilethwe ezinganeni ezisencane zisencane kakhulu. Lokhu kuzobasiza bazizwe bekhululekile.
Inja le okungcono kakhulu ekhaya elingenazo ezinye izilwane ezifuywayo nezingane. Lokhu ikakhulukazi kungenxa yokungaqiniseki kwabo kanye nokushayela ngamandla kwezilwane.
Bangabangane abahle futhi bangaba nothando olukhulu futhi bathembeke emndenini wabo oseduze.
Kodwa-ke, imvelo yempisi yabo kanye nokungaqiniseki kusho ukuthi bachuma kahle ekhaya elinomnikazi onolwazi okwazi ukwenza isikhathi sokuzijabulisa nokuqeqesha.
Umxube waseJalimane owaziwa ngokuthi yi-Shepherd Wolf unesikhathi sokuphila esiphakathi kweminyaka engu-9 kuya kwengu-13.
Isikhathi sabo sokuphila sisondele esikhathini sokuphila sikaMalusi waseJalimane seminyaka eyi-9 kuya kwengu-14 kunempisi yasendle yeminyaka eyi-8 nje kuphela.
Ngeshwa, ngenxa yezakhi zofuzo ezizuzwe njengefa kumzali wazo waseGerman Shepherd bathambekele ezinkingeni zezempilo zofuzo . Okubi kakhulu yi-Hip ne-Elbow Dysplasia.
I-Dysplasia yisifo esivamile semisipha ku-German Shepherds .
Ukwakheka okungajwayelekile kwesokhethi okwenza amalunga enja yakho agaye futhi ahlikihle esikhundleni sokuhamba ngokushelela. Kungaholela ebuhlungwini, ukukhubazeka nesifo samathambo.
Ukunakekela ukuxubana kwempisi okuyingxenye yasendle akulula futhi ngokushesha kuthatha isikhathi esiningi njengoba le nja idinga ukuhlangana okuningi ukuze izame ukubenza bakwazi ukubikezela.
Lolu hlobo ludinga umbuso wokuzivocavoca ohlelwe kahle, ukuqeqeshwa okuqhubekayo nokudla okunomsoco.
Singancoma kuphela le nhlanganisela yabanikazi bezinja abanolwazi.
Inja yayifuyiwe eminyakeni engaba ngu-135,000 edlule .
Kusukela ekufuyweni kwemboni yonke ekhiqiza ukudla kwavela futhi izinja eziningi zidla ukudla okomile okuhlanganisiwe. Kodwa-ke, impisi iseyinhlobo yasendle futhi iyachuma enyameni eluhlaza kusuka kulokho ekuzingelayo.
Ngakho-ke, yikuphi ukudla okufanele ukondle inja yakho? Ukudla okususelwa enyameni okuluhlaza.
Ukudla okuluhlaza kuzonikeza inja yakho amaprotheni namafutha adingekayo azokwenza kanjalo zisize zikhule futhi uhlale uphilile.
Izidingo zamandla ezinja zixhomeke ezicini ezahlukahlukene njengezinga lamandla azo, ubudala, isimo somzimba, nokuningi. Ngakho-ke, qiniseka ukuthi uthintana nodokotela wezilwane ngevolumu yokudla. Sincoma ukondla kabili ngosuku.
Ukuzivocavoca Okuthandayo Ukugijima Okude
Lolu uhlobo olunezidingo zokuzivocavoca eziphakeme. Ukubashiya bezivocavoca bodwa egcekeni akuyona inketho. Badinga imikhuba yokuzivocavoca ehleleke kahle ukusiza ukushisa wonke amandla abo.
Izimpisi ziyaziwa ukuthi zihamba amahora afinyelela kwayisishiyagalombili ngosuku.
Ukugijima noma ukunyuka isikhathi eside kuyizindlela ezinhle ukuzivocavoca i-German Shepherd Wolf Mix.
Ukuqeqeshwa kweLeash kubalulekile ngalokhu kuhlanganiswa. Uzodinga ukulawula okuningi kwenja yakho lapho uhamba esidlangalaleni - zizoba yingcosana ngaphandle komsebenzi we-leash.
Abelusi baseJalimane baziwa ngokuba uhlobo oluhlakaniphe kakhulu.
Lokhu kuhlanganiswa kubuye kube uhlobo oluhlakaniphile. Kodwa-ke, lokhu akuqinisekisi ukuthi ukuqeqeshwa kuzoba lula. Ukuhlakanipha kuyimfanelo eyodwa kuphela eyenza inja iqeqeshwe. Isimo kanye nokuzimisela ukujabulisa nakho kuyizimfanelo ezibalulekile zokuqeqeshwa.
Lolu hlobo luzimele, alunakulindelwa futhi lunenkani ngakho-ke ukuqeqeshwa njalo kubaluleke kakhulu.
Singancoma kuphela lolu hlobo lomnikazi onolwazi okwaziyo nikeza ukuqiniswa okuhle nenqubo ejwayelekile.
Ukubekezela kanye ukuphikelela kuyisidingo sokuqeqeshwa .
Ukuxhumana nomxube wakho we-German Shepherd Wolf kubalulekile futhi kuzoba yingxenye ebalulekile yokuqeqeshwa ngoba le nja isigamu sasendle futhi uhhafu ufuyiwe.
Futhi banemizimba enamandla yokudla nokuvikela ezodinga ukuzihlanganisa nawe usemncane.
Ekugcineni, ukukhuthazwa kwengqondo kuyadingeka kule ngxube eqinile ekhanda. Ngaphandle kokukhuthazeka kwengqondo okujwayelekile (isb. ukuqeqeshwa iqhinga ) bayoba nesithukuthezi futhi babhubhise.
Ukuxubha njalo kuyadingeka ekuxubeni kwe-German Shepherd Wolf ngenxa yoboya babo obukhulu obukhulu!
Sincoma ukuxubha inja yakho njalo ngosuku lwesibili.
Kufanele uzame ukuqala ukulungisa noma iyiphi inja kusukela isencane kakhulu. Lokhu kubaluleke kakhulu kumxube we-wolfdog njengoba izimpisi zingasetshenziselwa ukuxhumana nabantu noma ukuzilungisa.
Umxube we-German Shepherd Wolf uyi uhlobo oluhle futhi olungavamile .
Uma ucabanga ukwamukela le nhlanganisela qiniseka ukuthi uyakwazi ukubanikeza ukuzijabulisa, ukuqeqeshwa, ukuvivinya umzimba nokubekezela abakudingayo. Le nja ayikho emthethweni ezifundazweni eziningi futhi kufanele igcinelwe abanikazi abanolwazi kuphela.
Ngokuphindaphindiwe, inja yakho izoba qotho, ivikele, ihlakaniphe, idlale futhi empeleni ingalindelekile.
Ukungaqiniseki kwabo kungabenza bakhange, kepha kudala umsebenzi omningi kubanikazi.
Ucabangani ngokuxuba i-canine efuyiwe impisi yasendle? Siphe imicabango yakho ngezansi!
imidlwane ekhanyayo enemibala yaseJalimane
uyini umalusi waseJalimane onamandla
bichon frize miniature poodle mix
indlela efanele yokugqoka amahanisi wezinja
ukuhlanganiswa okumhlophe komalusi waseJalimane omhlophe